ကျွန်တော်ဝလုံးတွေ တော်တော်ရေးဖြစ်လိုက်တယ် (မှတ်စု ၁) | htaikseng
ကျွန်တော်ဝလုံးတွေ တော်တော်ရေးဖြစ်လိုက်တယ် (မှတ်စု ၁)
ကျွန်တော်ထိုက်ဆိုင်ပါ။ တောင်းလေးလေးဘက်ကာရံတဲ့မြို့လေးမှာ မွေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မြို့မှာ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ နမ်းပိန်းဆိုတဲ့ချောင်းလေးရှိပါတယ်။ သူများတွေအတွက်ကတော့ ရေတွေစီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းကလေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပျော်ရွင်မှု၊ ကြည်နူးမှုတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်မှု၊ ငိုကျွေးမှု၊ နာကျည်းမှု စတဲ့နာကျင်စရာတွေလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မှတ်ဥာဏ်ထဲက ပုံရပ်တွေထားသိုရာ စမ်းချောင်းကလေးပါပဲ။
အဲဒီစမ်းချောင်းလေးကို အုပ်မိုးထားတဲ့ တောင်ပြာတန်းတွေလည်း ကျွန်တော်ရဲ့ ငိုကျွေးနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တောင်တန်းပေါ်မှာ ကြည်ညှိဖွယ်ရာ ထုံးဖြူစေတီလေးတွေဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့စိတ်ဖြေရာ ငိုကျွေးရာနေရာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ တောင်တန်း၊ ထုံးဖြူစေတီ၊ စမ်းချောင်းလေး အဲဒါတွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ နားခိုရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်တန်းတုန်းက အမှတ်ရစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ကျောင်းစတက်တာ တစ်ပတ်လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းဆိုပြီးလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲဒီနေ့က ဆရာမက ၀လုံးတွေရေးခိုင်းတယ်။ ဘယ်သူမှ မထရဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ စာအုပ်နဲ့ ခဲတံမချွန်တစ်ချွန်လေးနဲ့ ၀လုံးတွေရေးတယ်။ ရေးတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော် သေးပေါက်ချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာမရဲ့အသံကိုနားထဲကြားယောင်နေတော့ အပြင်သွားဖို့မပြောရဲဘူး။ သည်းခံအောင့်ပြီး ၀လုံးတွေဆက်ရေးတယ်။ ခဏကြာတော့မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီအဟောင်းလေး သေးဆိုသွားတယ်။ ဝေခွဲမရနဲ့ ရှက်တယ်။ ဆရာမကိုလည်းမပြောရဲ။ ကြောက်လည်းကြောက်တယ်။ ထလည်းမထရဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်ဝလုံးတွေ တော်တော်ရေးဖြစ်လိုက်တယ်။
RT @bbcideas: Ever wondered why algorithms are called algorithms? It's thanks to Persian mathematician Muhammad al-Khwarizmi - born way b… 1 week ago
@Iadoremyanmar လနျ့တယျ 1 month ago
My Khansarkyi journey of feeling the nation. https://t.co/vc8tCDtCh33months ago
RT @mariaressa: Good morning from Manila! “If I were to remain silent, I’d be guilty of complicity.” Albert Einstein twitter.com/AoDemocracies/…3months ago
@branwenjeffreys @bbcmediaaction Thank you3months ago